श्रीमान श्रीमतीले अनिवार्य पढ्नुस ! नपढे जीवनभर पछुतो हुनेछ ! सम्पुर्ण श्रीमान श्रीमतीमा समर्पित – onlinedarpan:
Posted on December 7, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 97 Views
श्रीमान श्रीमतीले अनिवार्य पढ्नुस ! नपढे जीवनभर पछुतो हुनेछ ! सम्पुर्ण श्रीमान श्रीमतीमा समर्पित एकपटक अवश्य पढ्नु होला।
एक दिन छोराले अाफ्नो पितासँग गुनासो गर्छन।
छोरा := बुबा म मेरी पत्नीसँग अब सगै बस्न सक्दिन।
बुबा:= किन छोरा, के भयो एक्कासि?
छोरा := उनी धेरै बदलिएकी छिन। न मसँग राम्ररी कुरा गर्छिन। न मैले सोधेको कुराको जवाफ नै दिन्छिन। न मिठो खाना बनाउछिन। न मेरो इच्छाको ख्याल राख्छिन। न मेरो केयर नै गर्छिन। धेरै जसो कुरामा लापरबाही गर्न थालेकिछिन। अब डिभोर्स दिन्छु।
बुबा:= पख छोरा हतार नगर। एकपटक बिगत सम्झिहेर। तिमीले केही बाचा गरेको थियौं कि? यदि गरेको भए पूरा गरिदेउ। तिमीले अन्यत्र सम्बन्ध बनाएर उनलाई घात गर्दै छौ कि? त्यस्ता सम्बन्ध तुरुन्त त्यागिदेउ। सबै व्यबहारहरु उनिसामु खुलस्त पारीदेउ। अनि छुट्टिको समय उनि र छोराछोरीसँगै बिताउ। कहिलेकाही घुमाउन लैजाउ। अनि हेर। यति गर्दा पनि खुसि भइनन भने अनि मात्रै डिभोर्स दिनु ।
नभन्दै उसले बिगत सम्झिन्छ। उनलाई एउटा छड्के तिलरी बनाइदिन्छु भनेर बाचा गरेको हुन्छ। त्यो पनि पूरा गरिदिन्छ। अाफ्नो खराब बानि पनि त्यागिदिन्छ। हरकुरा सेयर गर्छ। छुट्टिको समय उनिहरुसँगै बिताउछ।घुमाउन लान्छ।
नभन्दै उनी पहिलेझै खुसि हुन लाग्छिन। अाफ्नो पतिको सबै कुराको ख्याल गर्न थाल्छिन। पहिले जस्तो थिइनँ त्यस्तै हुन्छिन ।दुबै जना पहिले झै हासिखुसि जिबन बिताउछन।
“तसर्थ ;सम्बन्ध बनाउन सजिलो छ। तर निभाउन कठिन छ। जसले सम्बन्ध सच्चा भाब र प्रेमले निभाउछन। उनिहरुको सम्बन्ध जीवन्त रहन्छ।र हामीलाई सहि मार्गदर्शन दिने अग्रजको पनि धेरै नै खाचो हुन्छ सम्बन्ध बलियो बनाउनलाई ।”
*हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो ?मन परे सेयर गर्नुहोला।*-(सुनिता थापा)
Tagged श्रीमान श्रीमती